မြေမရှိသော ကျွန်း ... ဆိုသည်မှာ? — Seadstem – Southeast Asian Digital
မြေမရှိသော ကျွန်း … ဆိုသည်မှာ?
Photo: © iStock-911765310_Alexpunker
၁၅ − ၂၀ မိနစ်။
မတူညီသော မြေဆီလွှာအမျိုးအစားများ၊ လူတို့၏ စားသုံးမှုနှင့် လုပ်ဆောင်မှုများ အတွက် သင့်တော်သော ရေအရင်းအမြစ်များ နှင့် ဇလဗေဒဆိုင်ရာ သံသရာ။ ရာသီဥတု၊ မြေဆီလွှာ တိုက်စားခြင်း နှင့် ကမ္ဘာမြေ မျက်နှာပြင်ကို ပုံဖော်သော၊ သက်ရှိများ၊ လူနေမှုအခြေအနေများ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးသက်ရောက်စေသော မြေဆီလွှာ−ရေ ဖြစ်စဥ်များ။ ဖိလစ်ပိုင်ရှိ ငလျင်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုများ နှင့် ရာသီဥတု ပုံစံများ။
မြေဆီလွှာ−ရေ ရွေ့လျားအား၊ ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ ကျွံဝင်ခြင်း၊ မြေဆီလွှာ အရည်များဖြစ်ခြင်း နှင့် ၎င်းသည် မြေကျွံဝင်ခြင်းနှင့် မည်သို့ဆက်စပ်သည်ကို မိတ်ဆက်ပေးရပါမည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသည် ကျွန်းစုနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ၃၆ ၂၈၉ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားသော ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းသည် ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး ကမ်းရိုးတန်းစာရင်းတွင် နံပါတ် ၅ နေရာတွင် ရှိသည်။ ဖိလစ်ပိုင် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းသည် ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း သင်္ကေတအဖြစ် ငါးဖမ်းခြင်း၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း ကဏ္ဍကို လွှမ်းခြုံထားသည်။ သို့သော် တိုင်းပြည် ရင်ဆိုင်ရသော အဓိကစိန်ခေါ်မှုများအနက် တစ်ခုမှာ မြေယာကျွံဝင်ခြင်းနှင့် မြေဆီလွှာအရည်များဖြစ်သွားခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ ဖိလစ်ပိုင်ရှိ မြို့များနှင့် ကျွန်းများ အများစုသည် နစ်မြုပ်လျက်ရှိသည်။ ထို့အပြင် နစ်မြုပ်နေသော ကုန်းတွင်းပိုင်း မြေဧရိယာ နှင့် ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှ ဝေးသောမြေ ဧရိယာများ၏ ဖြစ်စဥ်များကိုလည်း မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း နှင့် မြေအောက်ရေ ထုတ်ယူခြင်းဆိုင်ရာ မူဝါဒများမှာ ကောင်းမွန်စွာ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းမရှိပါ။ မြေကျွံဝင်ခြင်း နှင့် မြေဆီလွှာအရည်ဖြစ်သွားခြင်း ပြဿနာ နှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်းပြည်၏ အသိအမြင်မှာလည်း အကန့်အသတ်သာ ဖြစ်သည်၊ ဖြစ်စဉ်များကို ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် မြင့်တက်လာခြင်း နှင့် ရှေးရိုးပုံပြင် အဖြစ် အများဆုံး မှတ်ယူပြီး၊ ဒေသန္တရ စီမံခန့်ခွဲမှု နှင့် ဒေသန္တရ မူဝါဒ ကြိုးပမ်းမှုများ မှတစ်ဆင့် ၎င်းကိုလျှော့ချနိုင်သော ဖြစ်နိုင်ချေကို ငြင်းဆန်ကြသည်။ ဤလှုပ်ရှားမှုသည် လူ့အသိုင်းအဝိုင်း၏ လုံခြုံမှုနှင့် ဘေးအန္တရာယ် အခြေအနေများတွင် မြေဆီလွှာနှင့် ရေထု ရွေ့လျားအား၏ အယူအဆအပေါ် ဗဟိုပြုပါလိမ့်မည်။ အလွန်အကျွံ မြေအောက်ရေ ထုတ်ယူခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းမရှိသော ကမ်းရိုးတန်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ၏ သက်ရောက်မှုများကို ပြသရန် အိမ်တွင် အလွယ်တကူ ပုံတူကူးယူနိုင်သည့် စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို သင်တန်းနည်းပြမှ ပြလိမ့်မည်။ ရှေ့ဆက် ဆွေးနွေးမှုများသည် အသိပညာရှိခြင်း၊ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် (ရေ) ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု နှင့် သတိရှိခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးတွင် မူဝါဒနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဆီသို့ ဦးတည်သည့် ခေါင်းစဉ်ကို စနိုင်သည်။
ကျောင်းသားများအား မြေဆီလွှာ နှင့် ရေရွေ့လျားအား နှင့်အတူ အခြေခံ ရေအားလျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ သဘောတရားများ နှင့် မိတ်ဆက်ပေးခြင်း။
ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာ ကျွံဝင်ခြင်း၏ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော အန္တရာယ်များ အကြောင်းနှင့် မည်သို့ လျော့နည်းအောင် လုပ်ရမည်ကိုကျောင်းသားများအား သင်ကြားပေးခြင်း။
ထိန်းညှိထားသော မြေအောက်ရေ ထုတ်ယူခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ၏ အရေးကြီးပုံကို ကျောင်းသားများအား နားလည်စေခြင်း။
(ရွေးချယ်နိုင်သည်) ပင်လယ်ကမ်းခြေ ပတ်၀န်းကျင်ဆိုင်ရာ သင်ကြားလေ့လာမှုများနှင့် မြေအောက်ရေ မူဝါဒများ လိုအပ်ကြောင်းကို နားလည်ရန် ကျောင်သားများအတွက် အခွင့်အလမ်းတစ်ခု တင်ပြပါ။
မိုးရွာလျှင် – ရေသည် မည်သည့်နေရာသို့ သွားသည်ဟု သင်ထင်သနည်း။
မြေကြီးထဲသို့ အများကြီး စိမ့်ဝင်သွားတယ်လို့ သင်ထင်သလား၊ ကျွန်ုပ်တို့ ခြေအောက် မြေကြီးထဲမှာ ရေအများကြီး ရှိပါသလား။
မြေကြီးထဲရှိ ရေသည် အကျိုးသက်ရောက်မှု တစ်ခုခုရှိသည်ဟု သင်ထင်ပါသလား။
ရေနှင့်မြေကြီးကို ရောနှောသောအခါ ဘာဖြစ်မည်နည်း။ ၎င်းသည် မြေကြီးကို ပြောင်းလဲစေပါသလား – သင်ရေထည့်လိုက်သည်နှင့် တဖြည်းဖြည်း ပြောင်းလဲပါသလား (သို့) ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲသွားပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့၏ မြေဆီလွှာကို ဘယ်အရာက ပြုလုပ်ပေးသနည်း − မြေဆီလွှာများသည် တူညီပါသလား (သို့) ကွာခြားမှု ရှိပါသလား။ သဲများသည် ကျောက်စရစ်ခဲနှင့် မည်သို့ကွာခြားသနည်း။ ကျောက်တုံး၊ ရွှံ့၊ ရွှံ့စေး နှင့် နုန်းမြေ တို့၏ ခြားနားချက်မှာ အဘယ်နည်း။ ၎င်းတို့ကို ထိတွေ့လျှင် မည်သည့်သို့ ခံစားချက် ရပါသနည်း။
စိုစွတ်သောသဲသည် ခြောက်သွေ့သောသဲနှင့် မည်သို့ကွာခြားသနည်း (အမြင် နှင့် အထိအတွေ့)။ စိုစွတ်သော နုန်းမြေသည် ခြောက်သွေ့သော နုန်းမြေနှင့် မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
ရေသည် အဆုံးမဲ့ ဟုတ်ပါသလား။ မြေအောက်ရေ မည်သည့်နေရာမှ လာပါသနည်း။
Peter Jeffrey V. Maloles Philippines Representative Marine Science Institute, University of the Philippines Diliman https://www.usgs.gov/faqs/what-liquefaction?qt-news_science_products=7#qt-news_science_products